ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ပါတီလာလျှောက်စဉ်က ပါတီခေါင်းဆောင်မှာ ဦးသိန်းစိန်ဟု ဖေါ်ပြထားပြီး ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်မှာ ဦးဋ္ဌေးဦးဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
၂၀၁၅ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်ညတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဌာနချုပ်တွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ယာယီပါတီဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားသူ သူရ ဦးရွှေမန်းနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်သိန်း တို့မှာ ပါတီတွင် တာဝန်ယူထားသည့် ရာထူး အသီးသီးမှ ဖယ်ရှားခံခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။
ယင်းနောက် ပါတီဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးဋ္ဌေးဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးမှာလည်း ဦးတင်နိုင်သိန်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယင်းအခြေအနေများကို ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဦးရွှေမန်းသည် ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဟု အဆိုပါနေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ပါတီညီလာခံမှာ ဥက္ကဌနေရာကို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်ဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိန်နေရာမှာ ဦးသန်းဌေးကို ပါတီဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဦးသန်းဌေးဟာ ယခင် တပ်မတော်မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှာ ဒုဝန်ကြီး နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
သူရ ဦးရွှေမန်း (ယာယီပါတီဥက္ကဋ္ဌ) ၁ မေလ ၂၀၁၃ - ၁၃ သြဂုတ် ၂၀၁၅
ဦးဋ္ဌေးဦး ၁၃ သြဂုတ် ၂၀၁၅ - ၂၃ သြဂုတ်လ ၂၀၁၆
ဦးသန်းဌေး ၂၃ သြဂုတ်လ ၂၀၁၆ - လက်ရှိ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒုတိယအကြိမ် ပါတီညီလာခံတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးသန်းဌေးအား ရွေးချယ်။ Eleven News။ ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Union Solidarity Development Association/ Party။ Mizzima News။ 25 October 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Haynes, Jeffrey (2019). The Routledge Handbook to Religion and Political Parties. Routledge